Plugin WordPress SEO tsara indrindra: Rank Math | Martech Zone
Saika ny mpanjifa WordPress rehetra sy ny zavatra rehetra jerentsika dia mampiasa ny WordPress SEO plugin Yoast hitantana ireo singa fototra ho an'ny fanatsarana ny milina fikarohana (SEO). Ankoatra ny plugin maimaim-poana, Yoast dia manolotra karazana plugins manokana ihany koa.
Hitako ho tsara be foana ny plugin SEO an'i Yoast, saingy misy karazam-biby fiompy roa efa azoko:
Ny tontonana fitantanana Yoast SEO dia manana ny traikefan'ny mpampiasa azy izay tsy mitovy amin'ny an'ny mpampiasa WordPress default.
Yoast dia manery ny olona hanavao amin'ny iray na maromaro amin'ireo plugins karamany. Hey… nanome plugin maimaim-poana be mpampiasa be dia be izy ireo, ka tiako ny hahita azy ireo hamatsy vola an'io tolotra io. Na izany aza, indraindray dia somary manery ahy fotsiny izany, ary ny fampidirana plugins bebe kokoa dia tsy izay tena iriako amin'ny mpanjifa… mila kely kokoa aho.
The Yoast plugin dia mila loharano kely ary nampiadana ny tranokalako.
Fantatray – miaraka amin'ny finday sy ny fikarohana izay manakiana – fa mety hamoy mpitsidika an-jatony na an'arivony mihitsy aza ianao raha miadana kokoa noho ny mpifaninana aminao ny fe-potoana fandefasana ny pejy… ka ny hafainganam-pandeha no olana lehibe ho ahy. Somary manahiran-tsaina ihany fa mety hampiadana ny tranokalanao ny plugin SEO. Fantatro fa mety amin'ny plugin rehetra izany, saingy tena manakiana amin'ny SEO.
Fametahana WordPress WordPress Plugin SEO
Ny namako, Lorraine Ball, dia nilaza ny Plugin SEO Math Rank ary tsy maintsy notsapako avy hatrany izany. Agence Lorraine, Roundpeg, manangana tranokala WordPress tsara tarehy sy mora vidy ho an'ny mpanjifa taonina. Liana avy hatrany tamin'ny fitsapana ilay plugin aho ary nampakatra azy tamina tranonkala maro hahitako ny fahombiazany.
Ny mpamosavy hanova ny Yoast SEO Plugin ho Laharana Math dia tsotra. Ny tombony iray hafa amin'ny plugin dia ny ahafahanao manafatra sy manara-maso ny fanovana ny tranokalanao. Maniry aho fa nanolotra vondrona izy ireo handamina ny redirecto, fa ny fampihenana ny isan'ny plugins dia mendrika ny fahaverezan'io endri-javatra io.
Ankasitrahako manokana ny mpanadihady votoaty Rank Math, izay tena tsara ho an'ny SEO vaovao hanoratra sy hanatsara ny atiny ho an'ny teny fanalahidy mety ho kendreny. Misy endri-javatra marobe ao anatin'ity plugin SEO ity - miaraka amin'ny fampidirana amin'ny Google izay mahatonga azy io ho mahery vaika.
Tombontsoa sy tombony ho an'ny matematika laharana
Mora ny manaraka ny famosaviana mpamosavy - Rank Math dia manamboatra azy manokana. Rank Math dia manasongadina tsangan-javatra fametrahana sy mpamosavy amin'ny fametrahana azy izay mametraka SEO ho an'ny WordPress tanteraka. Rehefa apetraka dia manamarina ny toeran'ny tranokalanao ny Rank Math ary manolotra ireo toe-javatra mety indrindra hanaovana fampisehoana tsara indrindra. Ny mpamosavy tsikelikely avy eo dia manangana ny SEO an'ny tranonkalanao, mombamomba anao, mombamomba ny webmaster, ary toerana hafa SEO.
Madio sy tsotra Interface an'ny mpampiasa - Ny Rank Math dia natao hanehoana ny fampahalalana mety aminao amin'ny fotoana mety. Ny interface interface tsotra nefa matanjaka dia manasongadina fampahalalana manan-danja momba ny hafatrao miaraka amin'ny lahatsoratra. Amin'ny fampiasana an'io fampahalalana io dia azonao atao ny manatsara ny SEO avy hatrany. Ny Rank Math koa dia manasongadina snippet efa mandroso. Azonao atao ny mijery mialoha ny fomba hisehoan'ny lahatsoratrao ao amin'ny SERPs, ny fijerena ireo sombintsombiny manankarena, ary na dia ny fijerena ny endriky ny lahatsoratrao aza rehefa zaraina amin'ny media sosialy.
Rafitra Modular - Aza mampiasa afa-tsy izay tadiavinao ary esory ny sisa. Rank Math dia natsangana tamin'ny fampiasana rafitra maoderina mba hahafahanao mifehy tanteraka ny tranonkalanao. Atsaharo na alefaso modules isaky ny mila azy ireo ianao.
Kaody nohatsaraina ho an'ny hafainganana - Nanoratra ny kaody avy tany am-boalohany izahay ary manome antoka fa misy tanjona ny tsipika kaody rehetra. Nametraka traikefa an-taonany tao anatin'izany izahay ka ny plugin dia haingana dia haingana araka izay azo atao.
Noforonin'ny olona ao ambadiky ny MyThemeShop - Miaraka amin'ny Math Math, fantatrao fa eo am-pelatanana ianao. Ny fandrindrana sy ny fitazonana portfolio misy ny vokatra 150+ WordPress dia nampianatra zavatra iray na roa momba ny fanaovana plugins tsaratsara kokoa. Ary, nampidina ny fahalalantsika rehetra tamin'ny fikajiana ny laharana Math izahay.
Fanohanana mitarika indostrialy - Mikarakara ny anay manokana izahay. Tsy havela ho ambony sy maina ianao rehefa mampiasa Rank Math. Izahay dia manolotra ny fotoana fihodinana haingana indrindra ho an'ny fangatahana fanohanana ary hanamboatra bibikely haingana kokoa noho ny ahitanao azy ireo.
Taorian'ny herintaona mahery nanaovana an'ity plugin ity, dia nanavao ny dikan-karama aho ary nafindrako tany aminy daholo ny mpanjifako. Nohavaoziko ihany koa ny lisitry ny soso-kevitro Plugins WordPress ho an'ny orinasa miaraka amin'ny Rank Math ho an Alternative ho an'ny Yoast ary ny redirection Plugins.
Ny fiovan'ny mpanjifako rehetra amin'ity plugin ity dia tsy mampino. Tena tsy manandrana manamaivana ny kalitaon'ny Yoast aho na ny fiantraikan'izany amin'ny indostrian'ny SEO WordPress, fa ity fanavaozana ny plugin SEO ity dia nahagaga. Haingana kokoa, mora kokoa ny fampiasana azy, ary matanjaka kokoa – indrindra ny dikan-teny Pro, izay adika amin'ny fiteny ankehitriny. Alemaina, Espaniola, Frantsay, Italiana, Japoney ary Holandey.
Azoko antoka fa ho hitanao ny tombony. Ho fanampin'izany, tiako ny hahita ny ekipa ao amin'ny Automattic mitondra ity plugin tsy mampino ity eo ambanin'ny orinasany mba hanomezana SEO ny saina mendrika azy. ny Jetpack Ny safidy SEO dia tena tsy ampy.
Tsidiho ny Rank Math
Fampahalalana: mpanjifa aho ary mpiara-miasa amin'i Laharana Math ary mampiasa rohy mifandray hafa ao anatin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: Affiliatetsara indrindra wordpress SEO pluginfamakafakana atinyteny fanalahidylaharana matematikaseo pluginSitemapsWordPressplugin WordPresswordpress seositemaps xmlyoast